Ukuhlaziywa kwe-Star Wars Drones | Izindaba zamagajethi
Njengomlandeli omuhle wokuthi ngingowakwa- Isaga se-Star Wars, ukuvivinywa kwalawa ma-drones kube yinto ekhethekile. Akukona nje ukwakheka kwayo ngokucophelela kepha futhi nokuthintwa kwezinto zayo, ikhwalithi yengoma ekhipha ngokuqhubekayo kusuka kurimothi kanye nemisindo eminingi ebonakalayo evela kumabhayisikobho (izwi likaChewaka, ama-beep ka-R2D2, ...) nokuthi Ama-drones alingisa ngokwethembeka imodi yendiza yendiza yoqobo enza lokho ngokuzibeka ethubeni lokulawulwa yilezi izinkanyezi zezinkanyezi sithola izigaxa zehansi. Okwezinsuku ezimbalwa sikwazile ukuhlola i-TIE Fighter Advanced X1 kanye ne-X-Wing T-65, imikhumbi emibili edume kakhulu kuwo wonke ama-movie, ake sibone okuvelayo.
1 Idizayini, yakhelwe ukufaka abalandeli abalandeli
2 Isiteshi esinomsindo wama-movie
3 Yenzelwe impi
4 Izici zobuchwepheshe nendiza
5 Intengo yama-Star Wars drones
Idizayini, yakhelwe ukufaka abalandeli abalandeli
Njengoba siphawulile, ukwakheka ngokungangabazeki amandla amakhulu alo mkhiqizo; okuthile okunengqondo kakhulu ngoba bazi kahle ukuthi izilaleli ezihlosiwe zabathengi bangabalandeli be-Star Wars futhi labo ngeke bathenge ama-drones uma bengaboni ngokuqiniseka ngento esezingeni eliphakeme. Amadivayisi enziwe ngepulasitiki futhi alingisa kahle insimbi yensimbi esekhulile yemikhumbi yama-movie. Banokuthinta okuhle kakhulu, badwetshwe ngesandla futhi nemininingwane yemininingwane abayifakayo ingaphezulu kakhulu kwalokho ebesingakulindela ku-drone. Lokhu kwenza umkhiqizo wokugcina cishe ube indiza yokundiza ukuze ukwazi ukukubeka uhlobise igumbi lakho lapho ungazizami.
Zonke ezinye izesekeli ze-drone nazo ziphumelele kakhulu. Ukuzizwa kwesilawuli, isisindo salo, amalambu, umsindo wama-drones futhi nakanjani ibhokisi lelo lihle kakhulu njengoba bekungeke kube ngenye indlela. Njengoba sisho zingumkhiqizo we-10 ezingeni lokuklama; akukho lutho olungathuthukiswa ngaleso sikhathi. Futhi yize zingabonakala zintekenteke, iqiniso ukuthi bamelana nokushaqeka kahle ngenxa yesisindo sabo esiphansi.
Iziphephela zitholakala ezansi kwe-drone futhi ngenxa yombala wazo nokuklanywa kwazo cishe azibonakali lapho indiza okusiza ukuthuthukisa ubuqiniso bendiza ngesikhathi sokuhlolwa kwayo.
Isiteshi esinomsindo wama-movie
Ama-Drones alawulwa nge isiteshi Isebenza ku-2,4 GHz futhi izoba mnyama noma imhlophe kuya ngokuthi ngabe ngeyoMbuso noma iResistance. Ngaphezu kokusetshenziselwa ukulawula i-drone, lo myalo ungeza isisusa esikhethekile ekuhlolweni okuyisimo se- ukukhishwa kwamazwi woqobo wabalingiswa ukukuhalalisela ngesikhathi sendiza futhi izingqikithi ezaziwa kakhulu kusuka kwingoma yomsindo we-saga. Ngaphandle kokungabaza, ukuhambisana okukhethekile okuzokwenza ungene kakhulu ezicathulweni zomshayeli wendiza phakathi kwempi ye-galactic.
Kungumyalo osindayo futhi omkhulu; ejwayelekile njengoba udinga ukuba nezipikha zokukhiqiza umsindo ngekhwalithi enhle. Ngaphezu kokuhluka kombala, umyalo ngamunye unophawu lohlangothi oluprintwe kulo.
Imodi yempi iyindlela emnandi kakhulu yokusebenzisa la ma-drones. Ngalokhu kuzodingeka ukulanda uhlelo lokusebenza olukuvumela hlela impi ebandakanya ama-drones angama-24 futhi ongabala ngayo imithelela etholwe yidrone ngayinye bese ulayisha amaphuzu kumanethiwekhi wakho omphakathi. Umkhumbi ngamunye ungathatha ukushaya okungu-3 okuphezulu, lapho kuzoshaywa khona phansi bese kuzenzakalelayo phansi. Ngaphezu kohlelo lokusebenza (lapho ungabona khona yonke imininingwane yomhlaba yempi) umshayeli ngamunye uzokwazi ukubona ngomyalo wakhe inani lemithelela ayitholile ngama-LED abomvu ama-3.
Ukuze impi ibe mnandi ngempela, kuyadingeka ukuthi abashayeli bezindiza babe nezinga eliphansi lokuhlola, lapho kungenziwa khona ama-pirouettes namasu ahlekisayo ukuthi nge-drones eziningana ezindizeni ziyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi bangafika ku-56 km / h ngemizuzwana engaphansi kwemi-3.
Futhi kusempini yokushisa lapho i- «LiFi» ikhanya khona, okusha ubuchwepheshe obungenantambo kufakwe kulawa ma-drones futhi lokho kufinyelela ezikhathini eziyi-100 ngokushesha kune-Wifi yendabuko futhi yilokho okuzonquma lapho i-drone ishaye enye futhi kuyadingeka ukususa iphuzu lempilo.
Izici zobuchwepheshe nendiza
Njengoba sesishilo, mancane impela futhi alula ngejubane eliphezulu lika-56 km / h. Futhi banokulawula kokuphakama, uhlelo lokususa nokuzenzakalelayo okuzenzakalelayo, izivinini ezahlukahlukene zokundiza nemodi yokuziqeqesha. Njengoba kuvamile, kuvumela amaluphu angama-360º bese kucisha futhi kucishe amalambu.
El indiza ilula impela, yize kuyiqiniso ukuthi ukukhanya kwayo kungaba ukuhlanganisa nobunzima obengeziwe kubashayeli bezindiza abasanda kuqala.
Njengephuzu elibi, ngenxa yesisindo sayo esincane, ukuzimela kwayo okuphansi kakhulu, okungaba imizuzu engama-6-8 kuphela ngokuya ngamandla endiza, ngakho-ke singaba sifushane uma sisempini nabangane abambalwa.
Intengo yama-Star Wars drones
Intengo yalawa ma-drones iyabiza kakhulu kwimikhiqizo enesitifiketi sobuqiniso futhi esinenombolo. Ungakwazi thenga kwaJuguetronica ngo- € 69,90 kuphela kusuka kulezi zixhumanisi:
Thenga i-TIE Fighter Advanced X1
Uma ufisa, kukhona nefayela le- Uhlelo olukhethekile lomqoqi eza nebhokisi elinamalambu nomculo ovela kusingoma esiqinisekile ukujabulisa kakhulu ama-geek avela ku-Star Wars.
Idizayini nezinga lemininingwane
Isilawuli nomculo onengoma
Imodi yempi emnandi kakhulu
Impilo yebhethri empofu
Ophephela baphuma kalula
Izinkanyezi ze-Star Wars
I-TIE Fighter Advanced X1 I-X-Wing T-65
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Ukuhlaziywa kwe-Star Wars Drones
I-KELT-9b, iplanethi enezinga lokushisa eliphakeme kakhulu kunalokho ongakucabanga
Ukwakhiwa kuqala kutheleskopu eyi- $ 1.000 billion